Nagu saabsan - OMySimba-Huizhou Melikey Technology Co., Ltd.
OEM / ODM adeeg hal-joogsi ah
Khadkeena wax soo saar wuxuu ku lug leeyahay caruusadaha galmada, waxyaabaha galmada lagu ciyaaro oo ay ka mid yihiin gariiriye, dildo, qalabka dabada, giraan giraan iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxaan ku siin karnaa OEM & ODM adeeg qaas ah oo loogu talagalay kuwa istiraatiijiga ah.
Waxaan leenahay khad wax soo saar heer-koowaad ah iyo nidaam maareyn tayo oo adag oo hubiya in la keeno waqtiga-waqtiga.
Anaga lacagtaadu waa amaan oo meheradaada ayaa lagu sugi doonaa.
Kooxda OMySimba waxay ku dhalatay inay ku siiso alaab tayo sare leh si ay kuu anfacdo, si ay u siiso macaamiil muddo dheer OEM / ODM adeeg hal-joogsi ah, oo si kal iyo laab ah waxay kaa caawinaysaa inaad ku macaashto oo aad ku samaysato astaan. Khadkeena wax soo saar wuxuu ku lug leeyahay caruusadaha galmada ee loo yaqaan 'TPE', waxyaabaha galmada lagu ciyaaro oo ay ka mid yihiin mashiinnada wax lagu jajabiyo, gariiriyeyaasha, nooc kasta oo dildos ah, qalabka dabada lagu ciyaaro, faraanti guska, kubbadaha loo yaqaan 'ben wa balls', 'prostate massagers', masturbators, iyo inbadan.
Waxaan leenahay heer adag oo loogu talagalay alaabta ceeriin, silikoon caafimaad + ABS waxay ka dhigeysaa alaabooyinka kuwo aamin ah oo raaxo leh. Waxaan u doorannaa matoorrada gariirka iyo batteriga alaabada ay ku ciyaaraan si aan kuu siinno adeegsi ammaan badan oo waqti dheer wata.
Soo saare ahaan, waxaan marwalba adeegsan jirnay agabyada ugufiican waxaanna fikir badan galinay alaabta aan ku ciyaareyno - si aan u hubino inay had iyo jeer wax walba kor uqaadayaan oo aysan waligood kaa mashquulin xiisaha.
Alaabada ay ku ciyaaraan waa midabo kala duwan waxayna leeyihiin qaabab iyo cabbir kasta. Waxay u taagan yihiin bilaash, ciyaar, iyo jacayl jinsiyeed - jinsi kasta, jinsi, iyo jahayn - ha ahaato kali, wada joog, sariir, barkadda qubeyska, ama baabuur. Waxa muhiimka ah waa dareemid wanaagsan, farxad, iyo ku raaxaysasho.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo rogrogo. Taasi waa sababta aan u sameyno xulasho ballaaran oo ah waxyaabaha lagu ciyaaro galmada! Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinno inaad sahamiso waxyaabaha aad rabto, inaad bedesho caadooyinkaaga, oo aad u furnaato waxyaabaha cusub. Waxaan u istaagnaa qalabka galmada ee sameeya wax ka badan helitaanka dib u eegista wanaagsan, waxaan dooneynaa inaan kugu qancino si kasta. Sababtoo ah noloshu waa mid aad u gaaban oo aan galmo dhab ah loo helin
Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto shaybaarrada, amarrada jumlada, dhoofinta, ama adeegyada macaamiisha noocyada ah. Kooxda OMySimba waxay siisaa adeegyada iyo wax soo saarka ugu fiican ganacsigaaga ama is-isticmaalkaaga.
Waxaan nahay soo saare khibrad leh kaas oo ku jiray berrinka waxyaabaha galmada muddo 8 sano ah.
- Kooxda OMySimba
Ka hooseeya US $ 1 Million
WADARTA SANADKA GUUD
Xor ayaad u tahay inaad dirto baaritaan si aad u hesho buugga iyo qiimaha, fadlan ka tag e-maylkaaga ama Whatsapp, waxaan kugula soo noqon doonnaa 24 saacadood gudahood.
Cinwaanka:Dabaqa labaad, Andi Factory, No. 8, Degmada Zhongkaigaoxin, Huizhou, Guangdong, Shiinaha